Chii chakakosha mambure aCarole Baskin? Tiger King nyeredzi inotengesa nemesis Joe Exotic chivakwa che $ 140k - Pop-Tsika
Pakati-2020, Carole Baskin we Tiger King: Kuuraya, Mayhem, uye Kupenga mukurumbira wakahwina kumatare akamupa iye muridzi we ' Tiger King 'Zoo yaJoe Exotic. Zvino, musi waAugust 28, TMZ akataura kuti Baskin ari kutengesa chivakwa nemamiriro ekuti haigone kushandiswa se zoo kwezana ramakore.
Muna 2020, Exotic akatongerwa kuiswa mutirongo kwemakore makumi maviri nemaviri nekuraira hit pane yake 'nemesis' Carole Baskin, CEO weBig Cat Rescue. Sekureva kwemushumo weTMZ, Carole akatengesa iyo nzvimbo yaimbozivikanwa saJoe Exotic's G.W. Zoo ye $ 140,000 ine chisungo chepamutemo chayo chisingashandiswe se zoo.
Carole Baskin akawana mukurumbira mushure mekukakavadzana kwake naJoe Exotic kwakaratidzwa muNetflix's hit documentary yakanzi ' Tiger King: Kuuraya, Mayhem, uye Kupenga. '
Muna Ndira 2021, Carole akagovana na Fox News nezve zvichemo zvake neNetflix maererano nezvakanyorwa. Akati:
'Ndainzwa kunyengedzwa navo [Netflix] ... Vakatinyepera chose pamusoro pekuti chigadzirwa chavo chichava chii.'
'Mafungire ese kumashure [kwenyaya yacho] aive ekuti yaive ruvengo. Kune kukakavara, unofanirwa kuva nevanhu vaviri vari kupopotedzana. Handina kumboita hurukuro naJoe. Handina kana kumbotaura naye. '
Chii chakakosha mambure aCarole Baskin?
Chinyorwa chakagovaniswa naCarole Baskin (@carolebaskincat)
Makore makumi matanhatu okuberekwa Carole Baskin ari kukosha inodarika $ 2 mamirioni. Baskin akagumbuka zvakanyanya online mushure mechikamu chechitatu cheNetflix zvinyorwa Tiger King: Kuuraya, Mayhem, uye Kupenga. Iyo episode yakaratidza dzidziso dzekurangana kuti wekuTexas akabatanidzwa mukutsakatika kwemurume wake wechipiri, Don Lewis, muna 1997.
Carole Baskin, uyo asina kuwana mukana wekuramba zvirevo izvi pachiratidziro, akazviita mukati Big Cat Kununura webhusaiti post. Pawebhusaiti, akaramba izvo Don kuti anga atove mamioneya apo Baskin akasangana naye. Anotsanangura,
'Aive nebhizinesi rekucheka maasi kubva kumatrailer akadhonzwa nematarakita uye nekutengesa mabhokisi sekuchengetedza uye maasi kumashure kuGreat Dane ... Anogona kunge aive akakosha manhamba matanhatu… [chete].'
Mumiriri wekodzero huru yekatsi akarangarirawo mabatsiriro aakaita murume wake kuunganidza madhora zviuru zvishanu. Mune iyo posvo, iye anoti:
'Neni ndichiita tsvagiridzo, nhaurirano nemusoro wekujekesa pazvivakwa zvatakavaka izvi kupotifoliyo yezvivakwa yekurenda kana kutengesa zvakare yaikosha madhora zviuru zvishanu zvemadhora [sic] panguva yekushaikwa kwake.'
Carole Baskin zvakare akafunga kuti nhaka yake kubva kuzvitendero zveDon yaive yakaenzana nemamirioni maviri emadhora. Nekudaro, hazvizivikanwe kuti yakawanda sei yaakawana kubva kumatare edzimhosva achipokana naJoe Exotic, achiti miriyoni yemadhora. Uyezve, hazvizivikanwe kana akagamuchira chero mvumo yemadhora-akateedzana kubva Netflix .
maitiro ekuti mukomana azive iwe kuti unoda kurara naye
ndingazive sei kana achindida
unoziva sei kana zuva rekutanga rakafamba zvakanaka
mrbeast anoiwanepi mari yake